Saamaynt Isticmaalka Badan ee Telefoonada – Somali Paper
Saamaynt Isticmaalka Badan ee Telefoonada
Waxaa la daabacay July 4, 2018
Isticmaalka xad-dhaafka ah ee telefoonada ayaa ah mid saamaeeyay aduunka oo dhan. Dadka ayaa Ku qaata saacado badan oo ka mid ah wakhtigooda maalin walba.
Arintan ayaa waxaa walaac ka muujiyay xeeldheerayaasha arimaha bulshada iyo dhakhaatiirta dhinaca caafimaadka.
Marba dhinac u rog-roga badhanka telefoonka iyo eegista cod kasta oo soo dhaca ayaa qofka ka Dhigaya mid mashquul ah oo aan ka warhayn xataa waxa Hareerihiisa ka dhacaya.
Habdhaqankan ayaau u muuqda mid isu badalay qabatim iyo Balwad dadka qaar lasoo derista.
Hadaba waxaa jira daraasado ka dayrinaya isticmaalka xad-dhaafka ah ee telefoonada.
professor Larry Rosen, oo ku takhasusay cilmi-nafsiga ayaa sheegaya ” in uu soo badanayo walaaca laga qabo isticmaalka badan ee tefoonada”.
Larry Rosen, oo tixraacaya daraasadahaa ayaa aaminsan ” hadii aanu qofku markast eegin telefoonkiisa waxa uu u malaynayaa in uu wax weyni ka maqan yahay”.
Cilmibaadhis cusub oo ay samaysay jaamacada Derby ee England, ayaa lagu ogaaday xidhiihka ka dhaxeeye isticmaalka xad-dhaafka ah ee Telefoonada casriga iyo saamaynta dhinaca nafsiga ah ee soo wajahda dadka . waxaa kale oo la ogaaday markasta oo uu bato isticmaalka Telefoonku in uu qofku halis ugu jiro in uu u noqdo balwad ama qabatim.
Waxaa jira dhibaatooyin aan yarayn oo laga dhaxlo isticmaalka farah badan ee Telefoonada sida ay muujinayaan daraasado badan.
1-Dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah: waxaa ka mid ah walwal iyo murugo qofka lasoo darista Hurda xumo , iyo amateedka qofka oo yaraada.
2- Go’doon bulsho: waxaa kale oo uu istuicmaalka badan ee telefoonkuu sababaa go’doon dhinaca bulshada oo qofka ka dhigaysa maqane jooge aan ka warhayn waxa hareerahiisa ka dhacaya.
Waxaa lays-weydiinayaa dhibaatooyinka caynkaa ah yaa u nugul ? ma da’yarta mise dadka waaweyn?.
Sua’ashaaa waxaa ka jawaabay majalada la yidhaahdo American journal of preventive Medicine , warbixin lagu qoray sanadkii tagay ayaa lagu sheegay in da’yarta isticmaasha 11 baraha bulshooyinka, markasta oo ay aad u isticmaalaan barahaa waxaa bata dareenkooda qoqobnaanshaha
3-Wakhti lumis badan: waxaan shaki ku jiran in isticmaalka badan ee tiknoolajiyada in ay qofka ka luminayso wakhti badan oo noloshiisa ka mid ah weliba isaga oo aan dareemin.
Dhinaca kalana qaar ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyada sida Apple, ay soo bandhigay hab qofka u xisaabinya inta saacadood ee uu isticmaalay taleefoonka.
Waxaa kale oo ay shirkadaasi soo bandhigeen adeeg waalidiinta u sahlaya in ay la socdaan mudada ubadkoodu isticmaalaan tiknoolajiyda taas oo u fududaynaysa in ay ka xakameeyaan.
Balse dadka arintan dhaliilshan ayaa ku ku tilmaamay damac ay shirkadahu ku doonayaan lacag.
Hadaba sidee ayaa loo dhimi karaa saamaynta isticmaalka faraha badan ee mobilka iyo baraha bulshooyinka? .
Khubarada ayaa ku talinya in la raaco talaabooyin dhowr ah si looga baaqsado waxyeelada ka dhalan karta isticmaalka xad-dhaafka waxayna ku talinayaa arimahan hoos ku xusan:
Samayso jadwal go’an oo aad ku socoto.
Bar naftaada in ay ka nasato teknoolajiyada.
Bakhtiin ama yarayn ogaysiisyada badan ee telefoonka ku soo dhaca
Ka fogee mobilka sariirta hurdada si aanay gacantaadu markasta u gaadhinn.
Wakhti badan geli howlaha dhabta ee kuu yaala.
Hadaba si kasta ay tahay tiknoolajiyadani waxa ay leedahay faa’iido aan halkan lagu soo koobi karin Sidaa oo kalana waxa ay leedahay dhibaatooyin aan yarayn .
Qormooyin la xiriira Tech
Soo daadi qormooyin la xiriira Tech